FLATBED ENGRAVING & CUTTING MACHINE O-B - China Shandong Oree Laser
This co2 flatbed laser engraving machine is different from the other co2 laser engravers with the features of the new chassis.This flatbed co2 laser engraver & cutter withalarge working surface and high operating speed, supporting large-format cutting and improves the user’s work efficiency. The co2 laser engraver adopt integration frame structure design, making the machine running stable without noise. In addition, with the world class level imported component, the CO2 laser engraving machine hasagood cutting quality.
အလုပ်လုပ်အနေအထားရှာဖွေတာအတွက်အဆင်ပြေပြေနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန် 4.Red လက်ဝါးကပ်တိုင်တိကျ positioning ကို။ သုံးကြေးမုံနှင့်ထူးချွန်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါတဦးတည်း focal မှန်ဘီလူးလမ်းကြောင်းစနစ်က;
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်တိကျမှုလက်စွဲစာအုပ်အာရုံစိုက်လေဆာရောင်ခြည်ဦးခေါင်းနှင့်အတူ 5.Equipped, စက်ပန်းပုအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်, ထိုအာရုံအနေအထားထွင်းထုသည်နှင့်အညီနဲ့ Alternate ဖြတ်တောက်နှင့်ပစ္စည်းဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပျဉ်၏အထူချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်,
ရေ chiller, လေဆာရောင်ခြည်ပြွန်၏ပိုကောင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူ 7.Equipped, လေဆာရောင်ခြည်၏ဝန်ဆောင်မှုဘဝရှည်
ခြေနှင့် 8.Universal ဘီးနှင့်ချိန်ညှိခွကေိုစက်ပိုမိုအဆင်ပြေပြောင်းရွှေ့စေအကူးအပြောင်း,
10.Patent နည်းပညာ: ထူးခြားတဲ့အလိုအလျှောက်တက်ခြင်းဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး system ကိုထိုးနှက်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆေးလိပ်သောက်။
အလုပ်အဖွဲ့ဧရိယာ 1300 * 2500mm 1500 * 3000mm
လေဆာပါဝါ 80W/100W/120W/150W 80W/100W/120W/150W
တိကျပြတ်သားမှုတည်နေရာ ≤ + 0.01mm ≤ + 0.01mm
ထွင်းထုမြန်နှုန်း 0-20000mm / မိနစ် 0-20000mm / မိနစ်
min ။ ထွင်းထုအရွယ်အစား English Letter. 1.0mm*1.0mm English Letter. 1.0mm*1.0mm
အအေးအမျိုးအစား ရေအအေးခံခြင်း ရေအအေးခံခြင်း
Cooling Softwar DSP ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် DSP ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်
အမြင့်ဆုံးကိုစကင် Precision 2500DPI 2500DPI
ယခင်: Laser အက္ခရာ တင်. စက် OC
နောက်တစ်ခု: Metal & NONMETAL laser ဖြတ်တောက်ခြင်း machine အို-CM
ပုံစံ OB 1325 OB 1530
ထွင်းထုမြန်နှုန်း 0-20000mm / မိနစ်
option Blade ကို Worktable, Honeycomb Worktable, Red Dot ရာထူးစနစ်
ကျောက်ခေတ်, ကြွေ, ကျောက်, စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း, သဘာဝကျောက် Pebble ကျောက်ခေတ်, Slate √ √
1390 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
3050 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
50w CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
80w CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
9060 CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
acrylic CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
C02 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
Co. , လေဆာအက္ခရာ တင်. ထိုအဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
CO2 အက္ခရာ တင်. စက်
CO2 လေဆာကမ္ပည်းထိုးလုပ်ငန်း 40w 50w
Glass ကိုသည် CO2 လေဆာကမ္ပည်းထိုးလုပ်ငန်းစက်
CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်. ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်များ
CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက် 6040
Wood ကသည် CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
CO2 လေဆာတံဆိပ်ခတ်အက္ခရာ တင်. စက်
CO2 Mini ကိုလေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
Desktop ကို Mini ကိုလေဆာအက္ခရာ တင်.
High Quality CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
အက္ခရာ တင်. စက်ဖြတ်တောက်ခြင်းလေဆာ
လေဆာအက္ခရာ တင်. စက် 80w
လေဆာ Wood ကအက္ခရာ တင်.
Mini ကို 40w CO2 လေဆာကမ္ပည်းထိုးလုပ်ငန်း
Mini ကို CO2 လေဆာအက္ခရာ တင်. စက်
Mini ကိုလေဆာသတ္တုအက္ခရာ တင်. စက်
သစ်သားလေဆာအက္ခရာ တင်. စက်များ